Autotarget: Mashiinka Suuqgeynta Dabeecadda ee Emailka | Martech Zone
Autotarget: Mashiinka Suuqgeynta Dabeecadda ee Emailka
Isniin, November 17, 2008 Arbacada, February 10, 2016 Douglas Karr
Suuqgeynta macluumaadka waxay ku saabsan tahay tilmaamidda dabeecadaha, tirada dadka iyo sameynta saadaalin Analytics rajooyinkaaga si aad uga suuq geyso si caqli badan. Xaqiiqdii waxaan u qoray qorshe wax soo saar dhawr sano ka hor si tirakoob ahaan ah score ku soo dir iimayl macaamiisha ku saleysan habdhaqankooda. Tani waxay u oggolaaneysaa suuqleydu inay kala soocdo macaamiishooda macaamiisha iyada oo ku saleysan cidda ugu firfircoon.
Adoo ka turjumaya habdhaqanka, suuqleyda ayaa yareyn kara fariimaha, ama tijaabin kara fariimaha kala duwan, kuwa iska diiwaangeliyey ee aan furin, dhagsin, ama sameyn wax iibsi (beddelid) emaylka. Waxay sidoo kale u oggolaan lahayd suuqleyda inay sidoo kale abaalmariyaan oo ay si wanaagsan u bartilmaameedsadaan macaamiishooda ugu firfircoon. Muuqaalka waligiis lama oggolaan inuu ka dhigo sheyga shirkaddaas, laakiin shirkad kale ayaa u kacday heerkan suuq-geynta suuq-geynta iyo isfaham la'aanta qaybaha, iPost.
IPost waxay soo saartay matoor aad u adag oo bartilmaameed u ah bartilmaameedka habkiisa, loona yaqaan Bartilmaameedka otomaatiga ahTM (dhagsii si aad u weyneyso sawirka):
Craig Kerr, iPost's VP of Marketing, ayaa soo bandhigay macluumaadka soo socda ee ku saabsan sheyga:
Autotarget-ka iPost wuxuu u oggolaanayaa suuqleyda inay si weyn kor ugu qaadaan natiijooyinka ololaha suuqgeynta iimaylka iyagoo adeegsanaya saadaalin Analytics. Adeegsiga Autotarget-ka ayaa la muujiyey inay kordhineyso faa iidada ololeyaasha e-mayl ugu yaraan boqolkiiba 20 iyo inay si weyn hoos ugu dhigeyso qiima dhimista iyo kordhinta qiimaha furan.
Hal shirkad, tusaale ahaan, waxay kordhisay faa iidada suuqgeynta emailka 28%, qiimo dhimis ayey sameysay, xitaa suuqan adag, 40% waxayna kordhisay sicirka furan 90% kadib dhowr bilood oo kaliya markii ay isticmaaleysay Autotarget. Autotarget-ku wuxuu tirtirayaa mala-awaalka wuxuuna ku beddelayaa hab la caddeeyey, otomaatig ah oo hubiya in emailka saxda ah loo diro qofka saxda ah waqtiga saxda ah.
Qaar badan oo ka mid ah suuq-geynta emaylka ayaa ku faanaa inta ay kor u kiciyeen liistadooda emaylka. Waxayna leeyihiin, dhaqan ahaan, si fudud ayey u qarxiyaan inta badan ee ay kari karaan dad badan oo ku jira liiska emaylka sida ugu macquulsan. Habkani waa luminta ilaha iyo dariiqa hubaal ah ee lagu lumiyo macaamiisha: Inkasta oo macaamiisha qaarkood ay rabaan inay helaan emayl ganacsi oo soo noqnoqda, kuwa kale ayaa si dhakhso leh u yimaada inay u tixgeliyaan emayllada sida spam iyo diraha sida spammer
Tikniyoolajiyadda lafagurista gaarka ah ee Autotarget ma shaqo adag ayey u qabtaa suuqleyda iyagoo si toos ah uga faa'iideysanaya macluumaadka ay horay uga soo uruuriyeen macaamiisha? dhaqanka dhammaan kanaalladooda. Iyo, cusub oo leh noocoodii ugu dambeeyay, Autotarget wuxuu la shaqeeyaa adeeg bixiye emayl kasta (ESP).
Sidee Autotarget u shaqeeyaa
Autotarget waxaa wada laba wabi oo xog ah: marka hore, emaylka guji oo guji aragtida aragtida iyo, tan labaad, hab-iibsiga hab-marinka. Autotarget si otomaatig ah oo joogto ah ayuu uhelaa email guji oo si toos ah u fiiriyaa xogta habdhaqanka shirkadda bixisa adeegga iimaylka ee hadda jira.
Xogta akhlaaqda macaamiisha taariikheed waxay si otomaatig ah u noqotaa xog ficil ah
Autotarget wuxuu helaa xogta jawaabta e-mayl maalin kasta wuxuuna si muuqaal ah u soo bandhigayaa ilaa iyo ilaa iyo 125 qof oo macaamiil ah oo ay weheliyaan 12 bilood? dabagalka xogta habdhaqankooda ololaha emaylka. Marka shakhsiyaadkaas la aasaaso, Autotarget waxay si dhakhso leh ugu diri kartaa farriimo emayl bartilmaameed u ah macaamiisha iyada oo ku saleysan shaqsiyadooda gaarka ah, hagaajinta suurtagalnimada jawaab wanaagsan.
Waxay adeegsataa habab la xaqiijiyay oo ay kujirto falanqaynta RFM
Qeyb muhiim ah oo ka mid ah kooxaynta shaqsiyadeed waa falanqaynta RFM (Xusuusta isdhexgalka ugu dambeeya, Soo noqnoqodka isdhexgalka, iyo qiimaha lacageed ee macaamilka). Autotarget waa xalka e-mayl ee ugu horeeya ee otomaatiga iyo cusboonaysiinta falanqaynta RFM ee ololayaasha suuqgeynta iimaylka internetka.
Falanqaynta RFM ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa adduunka offline si loogu kala qaybiyo macaamiisha kooxo iyadoo lagu saleynayo jawaabahooda habdhaqanka ee farriimaha gaarka ah. Qiimaha falanqaynta RFM ayaa ah in la cadeeyay tobanaan sano in si sax ah loo saadaaliyo dhaqanka mustaqbalka ee macaamiisha iyadoo lagu saleynayo dhaqankoodii hore ee kanaalada badan iyo hab dhaqanka macaamiisha kale ee leh astaamo isku mid ah.
Maxay unugyada RFM kaaga sheegaan suuqgeynta iyo qiimo dhimista
Si dareen leh, macaamiisha leh qiyamka unugyada RFM ee ugu sarreeya ayaa aad ugu mashquulsan astaanta, waxayna u badan tahay inay ka jawaabaan dalab waxayna u baahan yihiin wax ka yar, ka yar ama, suurtagal ah, qiimo dhimis la'aan. Sawirka 'Autotarget RFM' ee iPost wuxuu muujinayaa sida saxda ah inta macaamiil halkii unug ee RFM ay si dhab ah uga jawaabeen (taasi waa la riixay, la daawaday, lana iibsaday) nooc kasta oo waraaqo la xushay ah. Ku hubaysan xogtan, suuqleyyaashu si dhakhso leh oo fudud ayey u abuuri karaan qaybaha macaamiisha iyagoo ku saleynaya jawaabta unugooda RFM ee suuqgeynta wax ku oolka ah ee wax ku oolka ah.
Autotarget waxay qaadataa 5 daqiiqo in la isticmaalo
Looma baahna sahan ama foomam, laakiin 100% saldhigga macaamiisha waxaa lagu muujiyey Autotarget. Macaamiisha waxay soo saaraan xog mar kasta oo ay la falgalaan farriin emayl ama ay wax ka iibsadaan goob kasta oo lagala xiriiro (degel, POS, ama xarunta wicitaanka). Isku soo wada duuboo, Autotarget waa awood, hadana deg deg ah oo si fudud loo isticmaali karo, xalka.
Tags: gawaaridacraig kerrdhaqanka macaamiishabartilmaameedka emaylkainta jeeripostdardardib u noqoshorfmfalanqaynta rfm
Eeg Mustaqbalka Xayeysiinta Muuqaalka
Fiidiyowgaaga 3-da ah ayaa guuleysan kara 50 ″ HDTV